Tatitra ankapobeny 2020 teo anivon'ny Tafika Malagasy | Primature
Mahazoarivo, ny 04 desambra 2020 – Manatanteraka fihaonambe mandritra ny roa andro, anaovana tatitra ankapobeny ho an’ny taona 2020, eny Ambatomirahavavy, ny Tafika Malagasy, ka tonga nanome voninahitra an’izany fotoana izany ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony dia notsiahivin’ny Praiminisitra fa araka ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika dia ny famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ao anatin’ny fotoana fohy no vina voalohany. Manatratra izany tanjona izany isika ka manana fanamby betsaka ny firenena amin’izao fotoana izao, ary izao vaninandro izao dia mitaky tafika manakaiky vahoaka. Noho izany, hoy izy, dia asa goavana no miandry ny Tafika Malagasy.
Voalohany amin’izany fanamby izany ny fiandrianam-pirenena, izay adidy masina iantsorohan’ny Tafika Malagasy eo amin’ny tanindrazana. Ny fanajàna ny rafitra sy ny andrim-panjakana misy hoy ny Praiminisitra, no ahafahana mitazona ny fiandrianam-pirenena.
Ny faharoa dia ny anjara andraikitra eo amin’ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Nambarany fa raha atao jery todika ny tamin’ny roa taona lasa dia mbola nanjaka ny asan-jiolahy maro isan-karazany sy ny tsy fandriampahalemana. Nanao dingana tamin’ny fampihavanana sy fifandraisana isika, hoy izy, ary namaritra paikady ny amin’ny fifamenoana eo amin’ny mpitandro ny filaminana rehetra, izay notanterahina tao anatin’ny fanajàna ny lalàna velona, ary dia niaraha-nahita ny fepetra nampiharina, toy ny fampandraisana andraikitra teo anivon’ny OMC, ny nametrahana ny “Zones Rurales Prioritaires de Sécurité” sy ny “Base Opérationnelle Avancée”, ny “patrouille militaire”, sy ny hafa koa. Izany no natao, hoy ny Praiminisitra, dia namerenana ny fifampitokisana teo amin’ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana, ary mba hampaharitra ny filaminana sy ny fandriampahalemana.
Ny tanjona fahatelo dia ny fiarovana ny fananana iombonana. Isan’izany ny zava-boahary sy ny fari-dranomasina. Tsy maintsy iombonana, hoy ny Praiminisitra, ny fitaovana izay eo am-pelan-tanana, ary mbola mila mametraka paikady isika hampanjariana ny filaminana sy fandriampahalemana an-dranomasina ka hahafahana manatsara ny fiarovana ny sisin-tany, izay adidy rahateo ifamenoana amin’ireo rehetra misehatra amin’izany lafiny izany. Nomarihiny fa manoloana izany anefa dia anjaran’ny Tafika Malagasy ny mametraka ny “Zone Maritime Prioritaire d’Intervention”.
Ny tanjona fahaefatra, hoy ny Praiminisitra, dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fanananany, ary ao anatin’ny ambana mila iomanana ny loza voajanahary sy ny aretina maro samihafa.
Naneho fankasitrahana ny asa rehetra nataon’ny Tafika Malagasy ny Praiminisitra, na ny teto amin’ny foibe izany, na ny tany amin’ny Faritra. Nambarany fa ny rafitra no fitaovana voalohany ahafahana manatanteraka ny fanamby, ary notsiahiviny ireo rafitra nahitsy sy napetraka teo anivon’ny Tafika Malagasy. Natsidiny nandritra izany fanazavàna izany ny tokony hanavaozana ny rafitra misy any amin’ny Faritra, mba hahafahana manapa-kevitra haingana, ary nambarany fa tsy maintsy hapetraka ihany koa ny “Délégation Régionale Militaire” any amin’ny Faritra, sy ny « Bataillons » rehetra isan-tsokajiny, izay hanampy amin’ny fandrindrana.
Teo am-pamaranana dia nanentana ny amin’ny tsy tokony hisian’ny mety ho fifaninanana eo amin’ny samy mpitandro ny filaminana ny Praiminisitra, mba hampiseho taratra ny maha-zava-dehibe ny fifamenoana.
← Fanavaozana ny ORTM
Fivoriana hamahana ny olan’ny vidim-bary →
Fahatsiarovana ny faha-46 taona nahafatesan’ny Jeneraly Ratsimandrava
Fanavaozana ny ORTM